Chaungtha Beach Beckons | Myanmar Business Today
Home Entertainment Chaungtha Beach Beckons
This season can generally be called the tourism season. However, people are traveling all the time these days as the country is full of seasonal festivals from concerts and arts festivals in the plains areas to traditional festivals in the mountain ranges to festivals related to historic pagodas. There are also national parks, community-based tourism destinations and beaches for people to enjoy more or less year-round.
During this season, most people prefer sunbathing onasandy beach to trekking. So, let’s talk about the beach known as the playground of Myanmar.
Chaungtha Beach in Tanintharyi Region, around 150 miles from Yangon, is popular among locals and often crowded with them. The beach offersawide array of foods and multiple accommodation options at reasonable prices. The room prices start from K10,000.
Besides the various tasty foods, there arealot of places to visit near the beach, including Thebyu Island, Phokalar Island, Kyauk Maung Hna Ma, Nghet Mountain and Uto Creek. You can hireabike or tok-tok motorcycle to visit these places.
With an abundance of seafood asabig draw, the beach receivesalot of visitors during the tourism season. The shops selling local foods and souvenirs made of seashells are crowded with buyers throughout the season. Thanks to tourism, local people have income from selling food and other goods as well as services. Tourism growth brings such benefits, and thus authorities should look for new beaches that will attract foreign travelers as well.
While new beaches are being surveyed and developed for tourism, measures should be taken to protect Chaungtha Beach, as the number of visitors has steadily risen.
People who needabreak from bustling, stressful city life often head to Chaungtha Beach, which is very easy to visit. There,afantastic evening can be had when you gaze at the horizon, dimly lit by the last rays of the setting sun, and see flares of fireworks in the sky.
ရန်ကုန်နဲ့မိုင် ၁၅၀ အကွာက အပန်းဖြေကမ်းခြေ ချောင်းသာ
မြန်မာပြည်ရဲ့ ခရီးသွားရာသီဆိုတာ အခုလိုကာလလို့ယေဘူယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီမရွေးတော့ ခရီးသွားပြတ်လပ်သွားတယ်ရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး ။ မြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသက ဂီတနဲ့အနုပညာ ပွဲတော်တွေ ၊ တောင်တန်းဒေသက ရိုးရာပွဲတော်တွေ ၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှှုစေတီပုထိုးတွေရှိရာနေရာတွေ ၊ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့ ဥယျာဉ်တွေ ၊ ရှုမျှော်ခင်းတွေ၊ လူမှှုအခြေပြုခရီးသွားနေရာတွေနဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေလှိုင်းလေကို ခံစားချင်ကြတဲ့ ခရီးသည်တွေရယ်လို့ ကိုယ်စီရွေးချယ်မှှုနဲ့သွားလာနေကြတာပါပဲ။ ခုချိန်ဟာပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့အတွက် စွန့်စားသွားလာရတဲ့ တောင်တက်ခရီးတွေထက်စာရင် ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးတွေကို ပိုပြီးသွားကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အများစုသွားကြတဲ့ ကမ်းခြေတွေထဲကတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုပါ ။ ရန်ကုန်ကနေ မိုင် ၁၅၀ လောက်မှာရှိတဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေကအပန်းဖြေနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေနဲ့
ခရီးသွားတွေထူထပ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ သွားလာလည်ပတ်ဖို့၊ စားသောက်ဖို့ ၊ နေထိုင်ရေးအတွက်လည်း ခရီးသွားရဲ့သုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေး အပေါ်လိုက်ပြီး အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တည်းခိုစရိတ်တစ်ရက်အတွက် ကျပ်
တစ်သောင်းလောက်ကနေစပြီးရွေးတည်နိုင်သလို အစားအသောက်အတွက်လည်း ဒေသခံတွေရဲ့ ချိုင့်နဲ့ချက်ပို့ကို မှာစားလို့ရပါတယ်။ သွားလာဖို့ဆိုလည်း ကမ်းခြေမှာပဲ အချိန်ကုန်ဖို့ထက်အနီးအနားမှာလည်ပတ်စရာတွေရှိပါတယ်။ သဲဖြူကျွန်း၊ ဖိုးကုလားကျွန်း လိုနေရာမျိုးကို စက်လှေနဲ့သွားတာမျိုး။ ကျောက်မောင်နှမ၊ ငှက်တောင် နှင့် ဥတိုချောင်း တို့လိုနေရာမျိုးတွေကို ဆိုင်ကယ်ငှားပြီး ဒါမှမဟုတ် သုံးဘီးငှားပြီးသွားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒေသပင်လယ်စာလှိုင်လှိုင်ပေါတဲ့ချောင်းသာဟာကမ်းခြေက ကျယ်သလို အများစုသွားကြတဲ့ရာသီမျိုးမှာတော့ လူတွေတိုးမပေါက်အောင်ထိ ပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ဒေသထွက်အစားအစာတွေ၊ လက်မှှုပစ္စည်းတွေ၊ ခရုခွံကိုအခြေခံတဲ့ လက်ဝတ်အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာကလည်း ခရီးသွားပုံမှန်ဝင်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာဆို ပွဲဈေးတန်းတစ်ခုလိုရှိတတ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့ ကမ်းခြေကို အခြေပြုပြီး ဝင်ငွေရှာရမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှာဖွေကြပါတယ်။ ဒါကခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုအားကောင်းလာရင် ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကမ်းခြေခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ အခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေအများစုသွားကြတဲ့ ကမ်းခြေတွေအပြင် နိုင်ငံခြားသားတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့် ကမ်းခြေအပန်းဖြေနေရာအသစ်တွေကို ဂရုတစိုက်ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ချောင်းသာကမ်းခြေကတော့ လူအရောက်အပေါက်များတဲ့အတွက်လည်း ပိုမိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေပါတယ်။ စိတ်ဖိစိမှှုတွေဝေးရာဝေးကြောင်း နီးနီးနားနားသွားလို့ရတဲ့ ကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ချောင်းသာကတော့ ပြည်တွင်းခရီးသွားအများစုထသွားထလာသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ညနေခင်းနဲ့ ညဦးပိုင်းတွေမှာ လေညှင်းခံပြီး ကမ်းခြေကိုခံစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးမှာ ပင်လယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီး မီးပန်းတွေဖွားခနဲဖွားခနဲ့ ဖွင့်ပေါက်လိုက်တာမျိုးနဲ့ကြုံရင်တော့ သိပ်ကိုထူးခြားလွန်းပါလိမ့်မယ်။
Previous articleSCB Offers Training for Myanmar SMEs Seeking to Tap Thai Market
Next articleCity Land Given to Farmland Owners in New Yangon City Project